၂၀၁၉ ခုနှစ်က စပြီး အင်္ကျီစပွန်ဆာဝင်ငွေ တိုးမြင့်ရရှိတော့မယ် အာဆင်နယ်
8 Aug 2018 . 5:10 PM
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အင်္ကျီစပွန်ဆာအဖြစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်က စပြီး နာမည်ကြီး Adidas ကုမ္ပဏီနဲ့ လက်တွဲသွားမှာဖြစ်လို့ အင်္ကျီစပွန်ဆာဝင်ငွေတွေလည်း တိုးမြင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ အခု လက်တွဲထားတဲ့ PUMA ကုမ္ပဏီနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ (၅)နှစ်စာချုပ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကျရင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး PUMA နေရာမှာ Adidas က စပွန်ဆာကုမ္ပဏီသစ်အဖြစ် အစားထိုးဝင်ရောက်လာမှာပါ။ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ PUMA ကုမ္ပဏီတို့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အရ (၁)နှစ်ကို ပေါင်သန်း(၃၀)ရရှိနေပေမယ့် အခု စပွန်ဆာစာချုပ်သစ်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က စပြီး အဲဒီထက်(၂)ဆပမာဏဖြစ်တဲ့ (၁)နှစ်ပေါင်သန်း(၆၀)အထိရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ နွေရာသီကာလမှာ ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့အတွက် ငွေသုံးစွဲလို့ ရမယ့်အနေအထားပါပဲ။ နောက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ စပွန်ဆာကြေးအများဆုံးရနေတဲ့ ထိပ်ဆုံးအသင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်စပွန်ဆာဝင်ငွေ အများဆုံးရနေတာက လာလီဂါထိပ်သီး ဘာစီလိုနာအသင်းဖြစ်ပြီး Nike နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အရ (၁)နှစ်ကို ပေါင်သန်း(၁၂၀)အထိ ရရှိနေတာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးက မန်ယူဖြစ်ပါတယ်။ တတိယနေရာမှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ပေါင်သန်း(၆၀)နဲ့ ရပ်တည်နေပြီး အာဆင်နယ်က ပေါင်သန်း(၃၀)နဲ့ အဆင့်(၆)နေရာမှာသာရှိနေတာပါ။
1 Barcelona – Nike £140m (2018-2028)
2 Manchester United – Adidas £75m (2015-2025)
3 Chelsea – Nike £60m (2016-2032)
4 Bayern Munich – Adidas £43m (2015-2030)
5 Real Madrid – Adidas £34m (2012-2020)
6 Arsenal – Puma £30m (2014-2019)
7 Tottenham Hotspur – Nike £30m (2017-Unknown)
Photo:Evening Standard,Getty Images
၂၀၁၉ ခုနှဈက စပွီး အင်ျကြီစပှနျဆာဝငျငှေ တိုးမွငျ့ရရှိတော့မယျ အာဆငျနယျ
အာဆငျနယျအသငျးဟာ အင်ျကြီစပှနျဆာအဖွဈ ၂၀၁၉ ခုနှဈက စပွီး နာမညျကွီး Adidas ကုမ်ပဏီနဲ့ လကျတှဲသှားမှာဖွဈလို့ အင်ျကြီစပှနျဆာဝငျငှတှေလေညျး တိုးမွငျ့ရရှိတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ အခု လကျတှဲထားတဲ့ PUMA ကုမ်ပဏီနဲ့ခြုပျဆိုထားတဲ့ (၅)နှဈစာခြုပျက ၂၀၁၉ ခုနှဈကရြငျ သကျတမျးကုနျဆုံးမှာဖွဈပွီး PUMA နရောမှာ Adidas က စပှနျဆာကုမ်ပဏီသဈအဖွဈ အစားထိုးဝငျရောကျလာမှာပါ။ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ PUMA ကုမ်ပဏီတို့ ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျအရ (၁)နှဈကို ပေါငျသနျး(၃၀)ရရှိနပေမေယျ့ အခု စပှနျဆာစာခြုပျသဈအရ ၂၀၁၉ ခုနှဈက စပွီး အဲဒီထကျ(၂)ဆပမာဏဖွဈတဲ့ (၁)နှဈပေါငျသနျး(၆၀)အထိရရှိသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ နှရောသီကာလမှာ ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူအားဖွညျ့ဖို့အတှကျ ငှသေုံးစှဲလို့ ရမယျ့အနအေထားပါပဲ။ နောကျပွီး ကမ်ဘာပျေါမှာ စပှနျဆာကွေးအမြားဆုံးရနတေဲ့ ထိပျဆုံးအသငျးတှထေဲမှာ ပါဝငျလာနိုငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။။ အခုလောလောဆယျ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျစပှနျဆာဝငျငှေ အမြားဆုံးရနတောက လာလီဂါထိပျသီး ဘာစီလိုနာအသငျးဖွဈပွီး Nike နဲ့ ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျအရ (၁)နှဈကို ပေါငျသနျး(၁၂၀)အထိ ရရှိနတောဖွဈပွီး ဒုတိယအမြားဆုံးက မနျယူဖွဈပါတယျ။ တတိယနရောမှာတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးက ပေါငျသနျး(၆၀)နဲ့ ရပျတညျနပွေီး အာဆငျနယျက ပေါငျသနျး(၃၀)နဲ့ အဆငျ့(၆)နရောမှာသာရှိနတောပါ။
by Ko Kyue . 21 mins ago
စက်တင်ဘာလအတွက် ဖီဖာရဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ
Zinedine Zidane ကို ရာထူးက ထုတ်ဖို့ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေ တောင်းဆိုနေပြီ
by Naing Linn .4hours ago
ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်(၁)မှာ အစွမ်းပြခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားများ
by Ko Kyue .5hours ago
ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စုအဖွင့်မှာ ရလဒ်ကောင်းဖို့ ကြိုးစားရမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်များ